၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏စစ်ဆင်ရေး 2018 - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2013-06-25 hits:
၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်း 2018, ယင်းအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းပုံမှန်ကြီးထွားလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကြီးထွားနှုန်းကိုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုကဏ္ဍများ၌ဦးဆောင်မှုအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထား. စက်မှုလုပ်ငန်း၏ခြုံငုံစစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်, တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတင်သော.
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, တိုးသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအထက်အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကို 12.4% တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်, အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအထက်အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနှုန်းထက်ပိုမြန် 5.7 ရာခိုင်နှုန်းအချက်များ; သူတို့ထဲတွင်, ဇွန်လအတွင်းကြီးထွားမှုနှုန်းခဲ့သည် 10.9%.
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, တိုးအထက်ပါ-စကေးအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတင်ပို့ဖြန့်ဝေတန်ဖိုးကို 6.1% တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်, နှင့်ကြီးထွားမှုနှုန်းအားဖြင့်ကျဆင်းသွား 7.3 ရာခိုင်နှုန်းရမှတ်တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်. ဇူလိုင်လထဲမှာ, သာတိုးအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတင်ပို့ဖြန့်ဝေတန်ဖိုးကို 1.5%.
အကောက်ခွန်စာရင်းများအရ, ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, အဓိကပို့ကုန်, သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်အကြား, တိုးဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ်၏ပို့ကုန်တန်ဖိုး 31.1% year-on-year, and the growth rate accelerated by 29.4% year-on-year; တိုးတင်သွင်းမှုတနှင့်ကြီးထွားမှုနှုန်းအားဖြင့်အရှိန်ar-on-year, and the growth rate accelerated by 22.6 ရာခိုင်နှုန်းရမှတ�တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်��ှစ်-on-တစ်နှစ်. အားဖြင့်ယုတ်လျော့ LCD ကိုပြားများ၏ပို့ကုန်တန်ဖိုး 4.1% year-on-year (ထ 3% in the same period last year); သွင်းကုန်၏တန်ဖိုးအာ�အလားတူကာလယမန်နှစ်အတွင်းလျော့ 10.1% year-on-year (1.4% in the same period last year).
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအထက်အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေတိုး 8.1% year-on-year, အားဖြင့်ယုတ်လျော့စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ 2.3% year-on-year, အဓိကအမြတ်အစွန်းအနားသတ်ခဲ့ 4.27%, �တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်�အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက် 8.9%. ဇွန်လရဲ့အဆုံးမှာ, မြေတပြင်လုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများ receiver အကောင့်တိုး 20.1% year-on-year, နှင့်ချောထုတ်ကုန်များစာရင်းတိုး 12.4%.
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, the ex-factory price of producers of electronic information manufacturing fell by 2.5% year-on-year. ဇူလအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ထုတ်လုပ်သူများ၏ဟောင်းစက်ရုံစျေးနှုန်းကျဆင်းnformaတစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်turing fell by 2.5% year-on-year, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တတိယသုံးလပတ်ကတည်းကဘက်တွင်ဆက်လက်ကတိုးမြှင့် 0.1% ယခင်လကနေ.
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း, တိုးအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် fixed ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 19.7% တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်, 5.1 ဇန်နဝါရီလ-မေလတွင်ထက်ပိုမြန်ရာခိုင်နှုန်းအချက်များ. သူတို့ထဲတွင်, အဆိုပါဆီမီးကွန်ဒတ်တာ discrete device ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ချမ်းသာကြွယ်၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကြီးထွားထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်, ၏တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူ 36.3%. အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံ circuit ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်အဖြစ်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်တွေမှာအကောင်းတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရှိန်အဟုန်ခံစားနေကြ, ဉာဏ်ရည်တု, နှင့် 5G. 31.2% နှင့် 27.5%.
ပြီးခဲ့တဲ့လက အဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရောင်ကနေဘုတ်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်